ओम अस्पतालका एमडिलाई रविको प्रश्न, ‘हाँसी–हाँसी अ*प्रेशन थि*एटर भित्र गएको अ*चानक कसरी मृ*त्यु भयो ?’ (भिडियो)
Homeसमाचारओम अस्पतालका एमडिलाई रविको प्रश्न, ‘हाँसी–हाँसी अ*प्रेशन थि*एटर भित्र गएको अ*चानक कसरी मृ*त्यु भयो ?’ (भिडियो)
September 25, 2019 Spnews समाचार 1
काठमाडौंको चावाहिलमा रहेको ओम अस्पतालमा पत्थरीको श*ल्यक्रिया गर्दा धादिङको गंगाजमुना गाउपालिकाकी २९ वर्षीया अनिता गुरूङको अस्पालको गम्भीर ला*परबाहीका कारण मृ*त्यु भएको आफन्तले आ*रोप लगाइरहे पनि आफन्तले २० लाख नगद लिएपछि घ*टना शान्त भयो । अनिताको मृ*त्यु भए लगत्तै चिकित्सककै ला*परबाहीका कारण उनको मृ*त्यु भएको आ*रोपमा आफन्तले अस्पताल परिसरमा प्र*दर्शन गरेर हं*गामा नै म*च्चाए ।
ओम अस्पतालका युरोलोजिस्ट तथा प्रोफेसर डाक्टर भोलाराज जोशीले अनिताको अ*परेशन गरेका थिए । आफन्तका अनुसार अस्पतालले सामान्य श*ल्यक्रिया गर्ने भनेको थियो। अनिता पनि हाँसी–हाँसी अ*प्रेशन थि*एटर भित्र गएको भएपनि अचानक कसरी मृ*त्यु भयो ? ओम अस्पतालमा यसअघि पनि धेरैले उपचारका क्रममा ज्या*न गु*माएका छन् । यही प्रश्न रवि लामिछानेले ओम अस्पतालका एमडिलाई सोधेका छन् ।
यो पनि पढ्नुस : असोज १ गते बुधबार । जब चितवनको भरतपुर–११, कैलाशटोलका २५ वर्षीय उदार पौड्यालले नारायणी पुलबाट हा*मफाले । त्यो दृश्य नियाल्दै थिइन् उदारकै प्रेमिका । ‘हे मेरो उदार… यो के गर्यौ तिमीले… मेरो उदार… यो के गर्यौ तिमीले…’ भन्दै ठूलो स्वरमा डाको छाडेको दृश्य नियाल्नेहरु पनि आँशु थाम्न सकिरहेका थिएनन् ।नारायणी नदीमा बे*पत्ता भएका उदार अझैसम्म फे*ला पर्न सकेका छैनन् । उनकी आमा अहिलेसम्म बेलाबेला अचेत हुन्छिन् । उदारकी प्रेमिकाको अवस्था पनि फरक छैन ।
उदारका छिमेकी तथा नयाँ किरण माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रेके पाण्डेका अनुसार उदार नारायणघाटको एक प्रतिष्ठित एटुजेट नामक मोबाइल सेन्टरमा काम गर्दै आएका थिए । उनी घ*टनाको तीन दिनअघि काठमाडौँमा एक साता बसेर फर्किएका थिए । काठमाडौँबाट फर्किएका उनी घरमा नगई दलदलेस्थित साथीको घरमा बस्न पुगे ।घ*टनाको दिन बिहान उनले आफ्नी प्रेमीकालाई फोन गरेर अ*न्तिम भेटका लागि आउन आ*ग्रहसमेत गरेका थिए । भरतपुरका हरेक सामाजिक क्षेत्रमा क्रि*याशील पाण्डे भन्छन्, ‘मैले ती युवतीलाई भेटेँ ।
उनीसँग बुझ्दा उनीहरुबीचको सम्बन्ध बिग्रेर हा*मफालेको बुझिएन ।घ*टनाको दुई घण्टा प्रेमीले बोलाएपछि प्रेमिका भेट्न पुग्छिन् ।’पाण्डेका अनुसार करिब २ घण्टासम्म देवदहमा उनीहरुसँगै बसेका थिए ।त्यहाँ उदारले नि*रासाका कुरा गर्दै नारायणीमा हा*म्फालेर ज्या*न फा*ल्ने कुरा गरेपछि प्रेमिकाले आफन्त र उदारका साथीहरुलाई फोन गरेर सम्झाउनका लागि बोलाउँछिन् । उनको आग्रह अनुसार एटुजेट मोइल सेन्टरमा काम गर्ने साथीहरु घ*टनास्थल आइपुग्छन् ।उनीहरुले नारायणी पुलमा उदारलाई भेटेर निकै सम्झा उँछन् ।तर दु*र्भाग्य !
उदारले घु*र्की मात्रै देखाउन खोजेको होला भन्ने साथीहरु र प्रेमिकाको सोचाइ ग*लत ठहरिन्छ । उदार जब नारायणीमा हा*म्फाल्न खोजे तब साथीहरुले तानेर जो*गाउन पनि खोजे । आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटेका उदार अन्ततः जोगाउने प्रयास हुँदाहुँदै पनि हा*मफालेरै छाडे ।हामीसँगको भेटमा पाण्डेले उदार परिवारको विगत स्मरण गरे । ‘उदार र एक दिदीसहित उनका बाबु आमाका दुई सन्तान हुन् । उदार त्यस्तै ४, ५ वर्षको छँदा उनका बाबुले दोस्रो विवाह गरेर विदेशतिर गएर बस्न थाले । त्यसबेला उनको आमाको उमेर २०, २२ वर्षभन्दा थिएन ।
अहिले त्यस्तै ४० वर्ष उमेरकी आमाले दुई छोराछोरी हु*र्काएर बस्नुभएको थियो’, पाण्डे सम्झन्छन् ।आर्थिक रूपले नि*म्न परिवार भए पनि अत्यन्तै प्रतिष्ठित परिवारका रूपमा सबैले लिन्छन् उदारको परिवारलाई ।उदारको हा*ईफाई अलि बढी नै थियो । बुलेट बाइक चढ्थे उनी । परिवारसँग अफिसले दिएको भने पनि आफैले किनेका थिए । पछिल्लो चरण होटल खोल्ने तयारीमा रहेको रहेका थिए उदार ।भरतपुर महानगरपालिका वडानम्बर–११ स्थित कैलाश टोल विकास क्लबका अध्यक्ष तथा अगुवा समाजसेवी रवीन्द्र बरालले पछिल्लो चरण युवा युवतीहरुलाई इ*न्टरनेटले ए*कात्मक सोचको विकास गरेकै कारण आ*त्मह*त्याको क्रम बढेको बताउँछन् ।
बराल भन्छन्, ‘यो खबर दु*खद् छ । पछिल्लो पुस्तामा ए*कात्मक खालको सोच बढेको छ । इ*लेक्ट्रोनिक मिडियामा ह*राउन, परिवारलाई खु*लस्त नभन्ने र आफूले जे सोच राख्यो त्यसै गर्ने, यो राष्ट्रकै चि*न्ताको विषय बनेको छ । यसमा समाजका सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ हाम्रो जि*ज्ञासामा उनले थपे, ‘मैले ती युवतीले उदार..उदार.. तिमीले यो के गर्यौँ भन्दै पटक पटक रुँदै चि*च्चाएको देखेको हुँ । पछि प्रहरी कार्यालयमा पनि रुँदै वि*क्षिप्त भएकी थिइन् ।मिल्ने साथी हामफाल्दा पी*डा हुनु स्वाभाविक हो ।’उदार पौड्यालको फेसबुकमा आमा र बहिनीबाहेक अन्य युवतीसँगै तस्बिर देखिँदैन ।
होली खेल्दा त्यस एटुजेट मोबाइल सेन्टरका केही केटी साथी र केटा साथीबीच सा*मूहिक तस्बिर खिचाएको बाहेक ती प्रेमिका भनिएकी युवतीसँग समेत सँगै तस्बिर खिचाएको देखिएन । उनी घुम्नमा शौ*खिन रहेको उनका तस्बिरहरुले पनि देखाउँछ ।उनले विभिन्न खेलबाट मेडलहरु पाएको पनि देखिन्छ भने दिदीको विवाहमा भावु*क हुँदै तस्बिर खिचेका छन् । छोरीको विवाहपछि एक मात्र छोरा उदारको विवाहको पर्खाइमा रहेकी आमा भने अहिले आँशुको पोखरीमा डु*ब्न बा*ध्य छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी एकनारायण कोइरालाले घ*टनाबारे अनुसन्धान भइरहेको र बे*पत्ताको खोजी कार्य पनि जारी रहेको बताए ।
इन्डोनेशियामा बिहेअघि यौ*न सम्बन्ध राख्न नदिने कानुनको सर्वसाधारणद्वारा चर्को वि*रोध
Renuka maharjan says:
I don’t understand… Initially they protest against hospital ..And after getting compensation ,they let the doctor free from the mistake he/ she has done ..It shows that the protest is only for economic compensation not for changing the system not for cancelling the license of such doctor.